Xayawaan 18,000 oo sano ku xayirnaa baraf oo lagu muransan yahay waxa uu yahay - BBC News Somali
Xayawaan 18,000 oo sano ku xayirnaa baraf oo lagu muransan yahay waxa uu yahay
1 Disembar 2019
Xigashada Sawirka, LOVE DALEN
Cilmi-baarayaasha caalamka ayaa isku dayaya in ay kala caddeeyaan in xayawaan da'diisu lagu sheegay 18,000 oo sano oo dhawaan laga helay gobolka Siberia ee dalka Ruushka uu yahay Eey iyo Uu'leey ama Yeey.
Xayawaankani oo la sheegay in uu laba bilood jiray markii uu dhimanayay ayaa laga helay dhulka aadka u qaboow ee barafka uu fadhiyo ee dalka Ruushka, waxaana wali aan isbaddalin sanka, ilkaha iyo dufta ama dhogortii uu ku dhashay.
Tijaabo dhanka hiddosidayaasha ahi oo laga qaaday xayawaankan ayaan wali kala caddeyn waxa uu yahay.
Khubarada cilmi Sayniska ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in xayawaankani uu yahay tafiir u dhaxeeya Eeyga iyo Yeeyda.
Xigashada Sawirka, SERGEY FEDOROV
Baaritaan ay khubaradu sameeyeen ayaa lagu ogaaday da'da xayawaankani iyo muddada uu barafka ku dhex jiray. Baaritaanka ayaa sidoo kale lagu ogaaday in xayawaankani uu yahay lab.
Dave Stanton oo ah cilmi-baare ka tirsan xarun lagu baaro taariikhdii dhore ee noolayaasha oo ku taal dalka Sweden ayaa telefishinka CNN u sheegay in baaritaanka hiddosidaha lagu ogaaday in suurtagal ay tahay in xayawaankani uu yahay tafiirtii ama faracii ay ka soo askumeen Yeeyda iy Eeyga.
"Waxaan haynaa macluumaad badan oo aan baaritaankaasi ku ogaannay. Macluumaadkaasi ayay suurtagal tahay in lagu kala sii ogaado in xayawaankani yahay Eey ama Yeey," ayuu yiri Dave Stanton.
Love Dalen oo ah cilmi-baare kale oo ka tirsan xaruntaasi ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay su'aal ah "xayawaankani ma Uu'leey dhal ah baa mise waa Eeygii ugu da'da weynaa taariikhada".
Saynisyahannada ayaa sii wadi doona baaritaannada dhanka hiddosidaha (DNA), waxa ayna ku rajo weyn yihiin in wax badan laga ogaan doono heerarka kala geddisan ee tafiirta Eeygu soo martay.
Xayawaankani ayaa hadda loo bixiyay "Dogor", waana magac ka soo jeeda luuqadda qowmiyadda Yakut ee degta dalka Ruushka oo micna ahaan ah "saaxib".
Khubarada ayaa rumeysan in Eeygu uu asal ahaan ka soo jeedo Yeeyda balse waxaa ay wali dood ka taagan tahay marka la billaabay in la dhaqdo Eeyga.
Daraasad la daabacay sanadkii 2017 ayaa lagu sheegay in bani'aadamku uu billaabay in uu dhaqdo Eeyga muddo haatan laga joogo qiyaastii 20,000 ilaa 40,000 oo sano.
Sawirro muujinaya taariikhda siyaasadeed ee Raúl Castro